Talata, Aprily 3, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Tonga amin'ny teboka farany ny dokambarotra niomerika. 50% ny olon-dehibe no mazoto misoroka ny doka amin'ny finday sy amin'ny birao ary 47% hafa kosa mazoto misoroka ny doka anaty fampiharana. Ireo no isa mitondra ny fitaovan'i Wayin, Tantara ara-tsosialy, fitaovana iray lehibe ho an'ny mpivarotra marika sy mpanao dokambarotra. Androany, raha tsindrio na swipe ny mpampiasa ao amin'ny Instagram Sponsored Story, matetika dia maharitra dimy segondra feno ny famoahana ny tranokalan'ny marika ao anaty fampiharana. Tsy manam-paharetana, sosotra ary